Sheekh Shariif Sheekh Axmad oo Xassan Sheekh Maxamuud Loolan lama Filan ah la Maagan – Xeernews24
Sheekh Shariif Sheekh Axmad oo Xassan Sheekh Maxamuud Loolan lama Filan ah la Maagan
Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud, ayaa waxa soo waajahay loolan culus oo kaga imanaya ragga kula tartamaya doorashada Soomaaliya ee qorshaysan inay qabsoonto dabayaaqadda bishan January.
Xassan Sheekh Maxamuud, oo ah 61 jir doonaya in mar labaad loo doorto madaxweynenimada Soomaaliya, ayaa wuxuu la daalaa dhacayaa mucaaradada adag ee ay isku bahaysteen siyaasiyiinta ka soo horjeeda oo uu ugu culus yahay ninkii uu xilka kala wareegay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, oo balan qaaday in haddii la doorto uu isbedel balaadhan ka samayn doono dalka Soamaaliya.
Hase yeeshee Xasan Sheekh Maxamuud oo dareensan loolan adag ee doorashadan uu kala kulmayo, ayaa maalmahan dambe bilaabay olole xoogan oo uu isku muujinayo, waxaanu waddooyinka Muqdisho ku dhejiyay sawiradiisa oo lagu dhejiyay biro waaweyn oo lagu ladhay qoraalo horumar ka hadlaya.
Mr. Jacob Moses oo ah nin Kenyan ah oo khabiir ku ah arrimaha siyaasadda Soomaaliya, ayaa warbaahinta Kenya u sheegay in Xasan Sheekh uu ku jiro dedaal siyaasadeed, balse haddana ay ka horayso mucaaradad adag oo weliba habaysan. “Murashixinta mucaaradka ahi waxay isu bahaysteen inaanu kursiga ku fadhiisin Xasan Sheekh, iyagoon u eegayn midkood heli doona, waxase ka go’an in kursiga uu midkood helo, Xassan Sheekhna daaqadda ka baxo.” ayuu yidhi.
Waxa iyaguna jira dawlado taageeraya qaar ka mid ah murashixiinta Xassan Sheekh la tartamaya, kuwaas oo lacag iyo taageero siyaasadeed iyaguna la garab taagan sidii murashaxa ay wataan u soo bixi lahaa islamarkaaa ay Xassan Sheekh daaqadda uga saari lahaayeen.
Geesta kale, Xassan Sheekh Maxamuud, waxa iyaduna dabka ku sii hurisay doorashada mar labaad toddobaadkan la doortay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari. Xassan Sheekh Maxamuud ayaa taageersanaa murashixii uu Jawaari ka adkaaday oo ah Mr. Cabdirashiid Xidig.
Kursiga guddoomiye ku xigeenka Baarlamaanka ayaa waxa isna ku guuldaraystay oo lagaga adkaaday Faarax Cabdiqaadir oo ah gacanta midig ee Xassan Sheekh Maxamuud. Waxaanay labadan qodob sii kiciyeen cabsida uu Xassan Sheekh ka qabo in mucaaradkiisa la tartamayaa ay doorashada kaga adkaadaan.
Hase yeeshee Xassan Sheekh oo ay isna taageerayaan dawlado kala duwani, ayaa waxa laga filayaa loolan adag, waxaana natiijada la ogaan doonaa dhammaadka bishan January.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/01/images-3.jpg 160 230 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-01-15 11:40:122017-01-15 11:40:12Sheekh Shariif Sheekh Axmad oo Xassan Sheekh Maxamuud Loolan lama Filan ah la Maagan
Khilaaf ka taagan doorashada xubnaha aqalka sare ee matalaya gobolada waqoo... Daawo Sawirada :Lacag badan oo lagu daadiyay mid ka mid ah Wabiyada Yurub mara...